lixdii kox ee horyaalka Ingiriiska ee Premier Leaguege-ga ee qeybta ka ahaa tartankii dhawaan lagu dhawaaqay ee Super League oo iskaga baxay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii lixdii kox ee horyaalka Ingiriiska ee Premier Leaguege-ga ee qeybta ka...
lixdii kox ee horyaalka Ingiriiska ee Premier Leaguege-ga ee qeybta ka ahaa tartankii dhawaan lagu dhawaaqay ee Super League oo iskaga baxay
Taageerayaasha iyo dadka ka faalooda ciyaaraha ayaa sheegay in horyaalka cusub uu noqon doono mid caddaalad darro ah oo meesha ka saaraya kooxo badan.
Madaxweynaha Uefa Aleksander Ceferin ayaa soo dhaweeyay go’aanka ay qaateen kooxahaan. “Waxay dib ugu laabteen baqshadda.”
“Muhiimadda hadda waa inaan horay u sii soconaa, dib u dhisnaa midnimadeenii cayaarta.”
Lixda kooxood ee ugu waaweyn Ingiriiska ayaa waxa tartankan ku wehliyay naadiyada Atletico Madrid, Barcelona iyo Real Madrid oo ka socday Spain, dhanka Talyaaniga waxaa ka socday AC Milan, Inter Milan iyo Juventus.
Ilaa 1,000 taageerasha Chelsea ah ayaa isugu soo uruuray bannaanka garoonka Stamford Bridge ka hor kulankoodii ay la lahaayeen Brighton Talaadadii. Taageerayaasha ayaa isu soo baxaas ku muujiyay sida ay uga soo horjeedaan ka qeyb galka kooxdoda ee European Super League.
Koxihii kale ee ka socday Spain iyo Talyaaniga ayaanan ilaa haatan soo saarin wax warbixin oo ku aaddan mowqifkooda European Super League ka dib markii ay lixdaan naadi ay ka baxeen tartanka.
Previous articleDil ka dhacay Degmada Afgooye
Next articleTaliyahii hore ee Nabad sugida oo taageeray shirkii Hawiye ee Shalay
shabakad isku xiran oo dilal qorsheysan ka geysta koonfurta iyo Waqooyiga...
Baadariga ugu sarreeya madhab-ka Catholic Pope Francis, oo kulan Ciraaq kula...